Forum serasera malagasy mianantra aiza ireo zanantsika izay afaka baccalauréat teto Mada - Dinika forum.serasera.org
mianantra aiza ireo zanantsika izay afaka baccalauréat teto Mada
Fitohizan'ny hafatra : mianantra aiza ireo zanantsika izay afaka baccalauréat teto Mada
pomderenette - 20/03/2012 15:16
1/ Aiza no mianatra ny zanatsika izay afaka baccalaureat teo Madagasikara (bac frantsay io na malagasy na hafa)?
2/ Ahoana ny condition de vie any @ toerana misy azy any? (mipetraka @ havana, manofa trano, mipétraka @ cité sns)
3/ Mianto-tena sa iantohan'ny RaR, raha iantohana dia ohatrinona no laninareo ho azy ireo isam-bolana?
Misaotra indrindra ho anizay rehetra mamaly ô!
pomderenette - 20/03/2012 15:18
azafady fa misy diso ilay titre: "mianatra"
hery - 20/03/2012 15:45
Izaho aloha tsy mbola nanan-janaka afaka bac fa ny zandriko amin'ny ankapobeny.
1. Mianatra eny Ankatso
2. Sahirana mafy amin'ny resaka trano satria misy aferafera be, ohatra hoe mividy lakilen-trano amin'ny mpianatra, mahatratra 5 millions ny fifindrana kanefa tranon'ny mpianatra eny amin'ny cité
3. Iantohan'ny Raiamandreny satria tsy ampy ny bourse omen'ny fanjakana, be be ihany no lany fa tena tsy arako.
pomderenette - 20/03/2012 17:04
misaotra an'i hery namaly
gravy ity resaka aferafera ity ka! mahakivy indraindray.
Izay izany ohatra iray ny eto Mada.
afaka mamaly daholo fa raisina an-tanandroa an
LazaDaddy - 20/04/2012 06:01
Izaho nianatra tao amin'ny Oniversiten'Antananarivo.
Tsy nisy nilana ilay baccalaureat satria mbola nanao fifaninanana vao noraisin'ny oniversite
Henjana ny fiatrehana ny fianarana satria ny trano nofaina tamin'ny oniversite dia nisy "amiante" na "asbestos". Tsy ara-pahasalamana ny ankabeazan'ny trano nomena ny mpianatra, tsy misy "arofanina" fiarovana amin'ny afo sy loza isan-karazany. Ny fampianarana kosa indray rehefa nodinihina dia toa tsy nilaina firy ny fankanesana tany an-tsekoly fa azo natao tamin'ny famakiana boky sy internet avokoa, ny boky sy internet aza mampianatra misimisy kokoa. Ny fampianarana tao amin'ny Oniversite kosa dia sady efa ntaolo no tsy nisy fampiharana, ireo mpampianatra koa efa ntaolo sy tsy maharaka ny teknolojia.
Ny vatsim-pianarana dia kely kanefa isaorana ny fanjakana be dia be. Isaorana ny fanjakana satria tsy nisy saram-pianarana no sady mbola nandray vatsy na dia kely aza.
Na izany aza anefa aleo ampandoavina saram-pianarana ny mpianatra, dia atao matotra tsara ny fampianarana sy ny fampitaovana.
bichette - 20/04/2012 12:23
- misy olona kilasy de seconde dia nijanona, nanao afera dia lasa nanambola sy azo lazaina hoe "tafita" araky ny fomba fiteny
- misy olona nanao fianarana, afaka bacc, nanohy fianarana, branche be debouchée, nahita lalana, nahita asa tsara.
- misy manana doctorat anefa tsy mahita asa sahaza ny fahaizany
- misy tsy afaka bac fa nanao formation secretariat, manana havana PDG nandray azy hiasa ao aminy, niasa, formé sur le terrain, lasa secretaire de direction, naka cours de langue teny amin'ny sisiny, nalefan'ny boite nanao formation indray : finalité : mandray vola tsara.
ledala - 17/06/2012 23:19
zany zao no iainan-tsika amizao, mbola misy koa aza ilay hoe dokotera lasa misofera taxi, ingenieur agro lasa mpanao photocopie....misy amin'izy ireny mandray vola tsara fa misy koa ny tsy afaka mihitsy, sahirana
manoasoa - 26/09/2012 09:29
1-Ao amin'ny FFF Mahaomby IMD ho amin'ny Fampandrosoana Maharitra.
2-Mipetraka amin'ny Dada sy Neny.
3-Miasa no mianatra.